Nagarik News - शुक्रबार सम्पादकीय : डरलाग्दो अतीतमोह
Monday 10 Kartik, 2077 | October 26, 2020
शुक्रबार सम्पादकीय : डरलाग्दो अतीतमोह
शुक्रबार २८ कार्तिक, २०७१
जनता आफूले विभिन्न कालखण्डमा गरेका संघर्ष तथा आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत भएको हेर्न चाहिरहेका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व जनताको शक्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गरेर अघि बढ्नुको सट्टा ‘नोस्टाल्जिक मुड'मा देखिन्छ। वर्तमानमा गल्ती नहोस् भनेर विगतका सकारात्मक पक्षलाई स्मरण गर्दै ‘इमोसनल' हुन सकिए पनि परिवर्तनको विरुद्ध हुनेगरी उभिने दुस्साहस कसैबाट पनि हुनु हुन्न।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि बंकरमा सुत्न जाने, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला राजालाई दाम चढाउन तयार हुने र माओवादी सचिव विप्लव अर्को सशस्त्र विद्रोहका लागि भूमिगत भेला गर्दै हिँड्ने हो भने जनताले शान्ति र सुविस्ता पाउन वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका केही नेता दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य तीन उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामध्ये पछिल्लो उपलब्धिविरुद्ध खडा भएका छन्। संविधान निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू नै प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध जाइलाग्नु राम्रो संकेत होइन। सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएर जेल सजाय भुक्तान गरेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले अगुवाइ गरेको धर्मनिरपेक्षताविरुद्धको अभियानमा अर्का भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, पूर्व केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणप्रसाद घिमिर पनि संलग्न छन्। राजनीतिक करिअरको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका यी नेताहरू धर्मको आडमा आफूलाई पुनः राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा टिकाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियानमा लागेको प्रस्ट छ। उनीहरू धर्मनिरपेक्षतासँगै राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नेसम्मका एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। परिवर्तनका विरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेताहरूद्वारा औपचारिक अभियान नै सुरु भइसक्दा पनि कांग्रेसले जुन मौनता साधिरहेको छ, यसबाट उसप्रति शंका उब्जिएको छ।
कांग्रेस दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि खडा हुन्छ कि केन्द्रीय सदस्य खड्काले सुरु गरेको अभियानजस्तै प्राप्त उपलब्धिलाई मास्नतिर लाग्छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारण जनताले थाहा पाउन कांग्रेसले छिटोभन्दा छिटो मुख खोल्नुपर्छ। कांग्रेसका युवा पंक्तिका केही आश गरिएका अनुहार पनि खड्काको दौराको फेर समाउँदै हिँड्न थालेबाट कांग्रेसले परिवर्तनको बोझ उठाउन सक्दैन कि भन्ने अनुमान जनताले गर्न थालेका छन्। कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, शंकर भण्डारी, लोकेश ढकालजस्ता नेता धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध उभिनु दुःखद पक्ष हो।
यसैगरी एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सशस्त्र विद्रोहको उद्गमभूमि रोल्पा पुगेर निकै भावुक बनेको समाचारहरू आइरहेका छन्। भूमिगत राजनीतिमा रहँदा बसेका घर तथा बस्तीमा पुग्दा अध्यक्ष प्रचण्डलाई काठमाडौँको कोलाहलभन्दा निकै शान्त र आनन्द महसुस भए पनि उनी फेरि अब पुरानै तरिकाले ती बस्तीमा फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। ‘मलाई फेरि बंकरमा सुत्न मन लाग्यो' भनेर प्रचण्ड ‘नोस्टाल्जिक' हुन खोजे पनि वर्तमान अवस्थामा उनी अतीतप्रेमी भएर आराम गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैनन्। कांग्रेसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छोड्न खोज्नु र प्रचण्ड फेरि युद्धकालमा खनिएका बंकरको निरीक्षण गर्दै हिँड्नु दुवै अतिवादी चिन्तन हुन्। संविधान निर्माणको काम फत्ते गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण घडीमा जिम्मेवार दलबाट यस खालको व्यवहार प्रर्दशन हुनु जनताको अभिमतप्रतिको घोर अपमान हो। प्रचण्डको रोल्पा यात्रालाई लिएर राजधानीमा टाउको दुखाउनेहरूको ध्यान कांग्रेस भित्र सुरु भएको परिवर्तनविरोधी अभियानमा पनि जान जरुरी छ। कांग्रेसका धेरै नेता खड्काको नैतिक समर्थक रहेको बताइन थालेको छ। ‘पर्ख र हेर' को सिद्धान्तमा रहेका थुप्रै कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता धर्मनिरपेक्षता हुँदै परिवर्तनका अन्य बुँदामा पनि प्रवेश गर्ने खतरालाई नेतृत्वले बेलैमा रोक्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, संविधान निर्माणको समग्र परिवश नै परिवर्तनविरोधी धुवाँको मुस्लोमा रङमङिने निश्चित छ।
एकीकृत नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएर गठन भएको नेकपा–माओवादी पनि ‘नोस्टाल्जिक' हुन खोजेकै भरमा टुक्रिने अवस्थामा पुगेको छ। अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका बीचमा देखिएको वैचारिक अन्तरविरोधले यो पार्टी टुक्रिने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ। दोस्रो संविधानसभालाई सक्रिय बहिष्कार गरेको नेकपा– माओवादीका अध्यक्ष किरण १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको जगमा जनविद्रोहमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्ने बताइरहेका छन् भने सचिव विप्लव सशस्त्र विद्रोहको धीत नमरेको भन्दै पुनः बन्दुक उठाएर क्रान्ति गर्नुपर्ने अडानमा देखिन्छन्। किरण र वैद्य दुवैले जुन विगतको सहारामा वर्तमानमा राजनीति गर्न खोजेका छन्, त्यो उनीहरूले सोचेजस्तो सहज छैन। सबै राजनीतिक दल आ–आफ्ना विगततिर लालायित हुनु भनेको उनीहरू वर्तमानसँग विरक्तिएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। दलहरूले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो वर्तमानमा गर्नुपर्छ। उनीहरू विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको अक्षरशः पालना गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि बंकरमा सुत्न जाने, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला राजालाई दाम चढाउन तयार हुने र माओवादी सचिव विप्लव अर्को सशस्त्र विद्रोहका लागि भूमिगत भेला गर्दै हिँड्ने हो भने जनताले फेरि पनि शान्ति र सुविस्ता पाउनका लागि वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाबिना अगाडि बढ्ने कुनै पनि राजनीतिक ‘कोर्स'ले जनताको हित गर्दैन। त्यसैले दलका नेताहरू ‘नोस्टाल्जिक' भएर बसिरहने कि जनताले सुम्पेका काम फत्ते गर्नतिर लाग्ने? यसको निर्णय छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने भएको छ।
तन्नेरी राजनीतिप्रति किन उदासीन?
राजनीतिमा सक्रियहरूले नै देखाउने प्रवृत्तिले यहाँ सबैतिर राजनीतिको आलोचना भइरहेको छ।राजनीतिप्रति तन्नेरीमा वितृष्णा जाग्नुमा केही कारण जिम्मेवार छन्। पहिलो त, राजनीतिक नेतृत्वले क्षमताभन्दा परका ठूलठूला सपना वितरण गर्यो। सपना कार्यान्वयन...
सीमा नटेकी बलिउडमा
केही दिनअघिमात्रै नेपालबाटै बलिउड फिल्मको घोषणा भएको थियो। उचाइ र अनुहारले बलिउड हिरोइनकै नापनक्सासँग मिल्ने एउटी युवती त्यो फिल्मकी हिरोइनका रूपमा चिनाइएको थियो। बलिउड सपना पालेर नेपाली फिल्ममा लागिरहेका एकसे...
'सदा चमत्कारको आशामा हुन्छु म'
रंगमञ्चबाट फिल्ममा प्रवेश गरेर सम्भवतः सबैभन्दा जमेका अभिनेता हुन्, सौगात मल्ल। 'कागबेनी', 'लुट', 'कथा', 'उमा', 'सुनगाभा', 'छड्के' लगायत फिल्ममा उनले आफ्नो अभिनय कौशल देखाएर दर्शकको मन जितेका छन्। आफ्ना पात्रलाई...
उपवासमा सहवास ?
प्रत्येक व्यक्तिका लागि यौन सम्पर्क अत्यन्त गोपनीय र निजी अनुभव हो। यौन जीवनलाई आनन्ददायी बनाउन मानिसले आफ्नै तौरतरिका अपनाउने गर्छ। विभिन्न समय र तरिका अपनाएर सहवासको अनुभव बटुल्ने यौन जोडीहरूले...
आफ्नै स्टाइलमा धर्मकर्म
अचेलका युवायुवतीले धर्मकर्ममा आस्थै राख्दैनन् भन्ने होइनन्। जतिसुकै आधुनिक या 'रफ एन्ड टफ' भए पनि उनीहरूलाई धर्मप्रति चासो छ। त्यसैले त तन्नेरीहरू माघको ठन्डीमा साली नदीमा डुबुल्की लगाइरहेका हुन्छन्, दक्षिणकालीको...
'डीआईडी' डान्सर नेपाल आउने
विदेशी मञ्चमा अब्बल ठहरिएका धेरै विदेशी गायक/गायिका नेपाली स्टेजमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। पहिलोपल्ट नेपाली स्टेजमा विदेशका प्लेटफर्ममा आफूलाई अब्बल ठहर्यायएका नेपालभाषी डान्सर देखिने भएका छन्।
केही समयअघि भारतीय टेलिभिजन एमटिभीमा प्रेम खोज्दै थिइन्, शिवांगी राना। युवा जोडीले 'प्रेमको शिकार' गर्ने प्रतिस्पर्धा 'स्प्लिट्स भिल्ला'मा उनको जोडी फाइनल राउन्डमा पराजित भयो। प्रेम शिकारी विजेता हुन नपाएकी शिवांगी...
'लर्तरो मान्छेले मलाई झेल्न सक्दैन'
आस्था राउतको पहिलो एल्बम 'आधार'का गीत 'झुम्के बुलाकी' र 'चौबन्दीमा पटुकी' निकै रुचाइएका छन्। स्टेज कार्यक्रमका लागि यतिबेला उनको माग उच्च छ। देशका साथै विदेशका धेरै ठाउँमा उनले आफ्नो प्रस्तुति...
कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?
गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...
मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेन
रंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...
'साथीहरू 'भाडा नलाग्ने गीत' गाइस् भन्छन्'
केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अचेल?भर्खरै नयाँ म्युजिक भिडियो 'नाइलनको सारी' सार्वजनिक गरेको छु। यसैको 'प्रमोसन'मा दौडिरहेको छु।कस्तो...
बाइसकोप र सिनेमा
म बसेको सानो शहरमा पहिलो पल्ट सिनेमा आयो। त्यसबखत सिनेमालाई 'बाइसकोप' भन्दथे, किनकि प्रदर्शन कालमा बाइस...